Aliexpress Isikhokelo se-LT, ukubhaliswa, ukuthenga, amaxabiso ngeeYurophu, i-Customs, Disputai
Ikhaya » Blog » Izifundo » Aliexpress Isikhokelo se-LT. Ubhaliso, ukuthenga, ulwimi lwaseLithuania, amaxabiso e-euro, uncedo, amasiko kunye neengxabano.
14532 U kuqala
Aliexpress ngesiLithuanian. Ndingenza njani Aliexpress ukuguqulela iwebhusayithi kwi-english?
Tyelela Aliexpress kwisayithi.
Cofa iqhosha leLwimi (ulwimi)
Cofa iqhosha lokukhetha ulwimi (khetha uLwimi)
Isiza siya kuguqulelwa kwisiLithuania. Cofa "Bonisa imvelaphi" ukucima ukuguqulelwa (bonise okokuqala).
Ukuphela kweyona ndlela yukuthi awuyi kukwazi ukukhangela umkhiqizo ngokufaka igama layo kwisiLithuanian kwibhokisi lokukhangela, ngoko kuya kufuneka ufake igama lomtshi ngesiNgesi. Nangona kunjalo, unokukhangela izinto ngokusebenzisa iinkcukacha kwicala lasekhohlo lesayithi. Aliexpress iya kuboniswa ngesiLithuanian, kodwa iya kuthatha isenzo njengesiNgesi.
Aliexpress LT. Indlela yokubhalisa AliExpress ivenkile uze wenze umyalelo wokuqala?
ISIPHO: Abathengi abatsha abangafakwanga nayiphina iodolo kwiakhawunti yabo, ngokucofa kule linki, unokukhetha isipho ngeesenti nje enye!
Emva kokuya Aliexpress.com okanye ruAliexpress.com nqakraza Joyina Simahla
Faka i-imeyile idilesi ye-imeyile, igama lokuqala, igama lokugqibela, iphasiwedi, phinda iphasiwedi uze ufake ikhowudi yokukhusela. Hlola ibhokisi ovumelana ngayo Aliexpress mithetho yomsebenzisi. Cofa "Yakha i-akhawunti yakho"
Skrolela kwidilesi yakho ye-imeyile. ngeposi Emva kokufumana i-imeyli yokuqinisekisa yokubhalisa, cofa "Qinisekisa i-imeyile yam"
Kukhangela okanye kwimenyu, khetha umkhiqizo / iimpahla
Ukubeka uluhlu lwamanani
Ukulinganiswa komkhiqizo I-4-5 iinkwenkwezi (ngabathengi beemviwo)
Isikhundla seMveliso (Eyona ndlela ihamba phambili / Ininzi yemiyalelo / Ukuthengiswa kwexabiso / Intengo)
Ngokwempendulo yabathengi, inani lokubala / inombolo yombutho luhlanganisiwe.
Emva kokukhetha into oza kuyibona:
Igama lokuthengwa / ixesha elide lokuthengisa / Ukulinganisa ngokubanzi / Ukuthenga isithuba ngokuthengisa / Ipesenti yempendulo emihle
Ukulinganiswa komkhiqizo kunye nenqaku / umyalelo wencwadi
Iinkcukacha zomkhiqizo / Ukuthunyelwa - Ukuthumela / ukuthengiswa kwempahla
Ngezantsi uza kubona:
Emva kokuphonononga kunye nokuchofoza kwi-3, uza kubona kuphela ukuhlaziywa ngezithombe
Emva kokukhetha indlela yokuthumela kunye neenkcukacha zemveliso, nqakraza kwi "Yongeza kwi-Cart"
Ngokunqakraza kwi-"View Shopping Cart" uya kuthathwa kwinqwelo kwaye uya kukwazi ukuqhubeka uthengisa ngokuchofoza "Qhubeka ukuthenga".
Ngebhasikiti uza kubona:
Into yakho ekhethiweyo kunye nenkcazelo yayo emfutshane
Inani kunye nexabiso lempahla
Ukuthumela kweNtlawulo - Ukuthunyelwa kwamahhala okanye iindleko zokuthumela / ixesha lokuthumela elifutshane
Ukuchofoza ukuthenga konke kuya kuqinisekisa ukuthenga kwakho
Ngexesha lokuqala uza kufuneka ufake iinkcukacha zakho. Ngokunqakraza Setha njengento engagqibekanga, idilesi yokuthumela iya kuba yikheli eliphambili kwi-akhawunti yakho. Emva koko nqakraza "Londoloza uze uthumele kule dilesi" (Gcina kwaye uthumele izinto kule dilesi)
Kuphezulu uza kubona idatha yakho. Ngokuchofoza ukuhlela, ungawahlela. Kwibhokisi elingenanto elingezantsi ungashiya umnqweno kumthengisi malunga nento (ngesiNgesi / isiRashiya) kumthengisi.
I-16 ibonisa inombolo yekhadi lokubhadela
Ikhadi / inyanga / ngonyaka (isb., 07 / 18)
Ikhowudi yokukhusela i-3 ikhowudi (ngokuqhelekileyo itholakala ngaphesheya kwekhadi)
Emva koko cinezela i-4 "Qinisekisa" kwaye umyalelo wakho uya kuqinisekiswa. Emva koko, uya kufumana i-imeyile yokuqinisekisa. imeyile, kunye neentsuku ezimbalwa emva kokuba into ithunyelwe, uya kufumana incwadi yokuqinisekisa yokuthumela.
Imisebenzi kunye neentlawulo zeposi zokuthengwa kwempahla evela kumazwe asithathu ngaphandle kweYurophu Yomanyano.
Ungafunda ngale nto ngokuchofoza apha.
Aliexpress mbambano (kwimeko ngxabano), umonakalo, umonakalo okanye ukuhanjiswa kweempahla.
Ukuba awufumani imveliso, yonakaliswe okanye kukho enye ingxaki. Ungaqalisa ingxabano oya kujongana nomthengisi, ngelixa ungavumelani neengcamango kunye Aliexpress ngoncedo. Ukuba sele kwenzekile ukuba kufuneka uqale, yenza njalo emva kweentsuku ze-60 emva kokuyalela into (ukuthumela impahla). Usebenza njani?
Inqaku ngalinye linamaphepha alinganisiweyo (ulwazi olungaphezulu kwiimvume apha).
Eyokuqala inxulumene nomgangatho wemveliso, ngokungangqinelaniyo nenkcazo.
Okwesibini kuthetha ukuba into iya kuthunyelwa kwiintsuku ze-60 okanye imali yakho iya kubuyiselwa kwisicelo.
Cofa yam Imiyalelo (kwimeko Yam imiyalelo)
Icala lekunene lento apho ingxaki ibonisa khona ixesha elithathayo ukuqala ingxabano,
Kule meko, iintsuku ze-34 (emva kokuphela kwesi sihlandlo, mhlawumbi awuyi kusombulula ingxaki ngenzuzo yakho).
Ngoku nqakraza "I-Dispute Open" (kwimeko Qalisa ingxabano)
Cofa kwiNgxaki yokuVula kwakhona
Ukubuyiselwa kuphela - ukuba umthengisi uyavuma, umkhiqizo uya kuhlala kuwe kwaye uza kubuya yonke into okanye inxalenye yemali.
Iimpahla ezibuyiselwayo - Uya kubuyisela impahla kwaye umthengisi uya kubuyiselwa imali. (indlela enqabileyo yokusombulula ingxabano)
Ungatshintsha indlela ogqiba ngayo.
Ngaba ufumene umkhiqizo Ewe - Ewe okanye Ewe.
Ukuba ukhetha indlela "yokubuyiselwa imali", nceda ubonise inani lemali elibuyiselwe (ungachaza inani elipheleleyo).
Chaza ingxaki ngokucacileyo
Qiniseka ukuba ulayishe ubungqina, iividiyo okanye iifoto.
Chofoza u-Hambisa - Thumela.
Funda ngezantsi ...
Ngoku ulinde impendulo yomdayisi. Kufuneka ufumane ukubhaliswa nge-imeyile ukuze uhlaziywe kwimpikiswano.
Umthengisi angamkela imimiselo oyinikezile, cebisa isisombululo esithile (isb., Thumela kwakhona umkhiqizo ukuba awuzange ufumane okanye uwonakele, awusebenzi), ukunciphisa inani lembuyiselo kunye ne-pn. Ungavuma okanye ungavumelani. Ukuba awuvumelani, unokulungelelanisa imigaqo kwakhona.
Nangona kunjalo, ukuba iqela lingavumelani okanye umthengisi akabhali emva kwexesha elizayo (emva koko 15d.), Unokuklibanisa INgxabano Ingxabano kwiphepha leengxabano, ngoko ingxabano iya kubangela Aliexpresseya kunceda ukuxazulula ukungavumelani. Ukuguqula kuya kukuvumela ukuba ulungelelanise imbambano. Ukukhansela, Ukukhansela Impikiswano iya kukhansela impikiswano.
Aliexpress unokucela ubungqina obongezelelweyo. Ngokuqhelekileyo Aliexpress kuthatha isigqibo esiluncedo kumthengi, kodwa kuxhomekeke kwimeko. Aliexpress isigqibo sigqityiweyo kwaye singavunyelwanga (ukuba awuvumelani nesigqibo sika-Aliekpress, ungabhala isikhalazo AliexpressUi ngebhanki, kodwa isihloko esahlukileyo ngokupheleleyo kwaye kwiimeko ezininzi kukho ukulahleka kwexesha).
Aliexpress Lithuania. Izilungiso zendawo yesondlo, amaxabiso nge-Euro.
Cofa kwiShiphi kwiqhosha.
Apha ungasetha indawo yakho, ngoko uza kubona ixabiso elifanelekileyo lokuthunyelwa kweempahla.
Misela imali (Ngokomzekelo: Eur-Euro)
Cofa kwi Save button.
Ukususela ngoku ngoku, amaxabiso aya kuboniswa ngeYurophu, kwaye uza kubona iindleko zokuthumela ngqo xa ukhetha ilizwe lakho lokuhlala kwiimpahla.
Njengoko u bonayo Aliexpress ixabiso ngeyuro?
Unako ukulandelela ukuthunyelwa kwakho ngokuchofoza apha.
Inkcitho - engabizi
Ukufumana inxalenye yentengo ehlawulwe yento. Funda kwi ngokuchofoza apha.
Aliexpress Ukhokelo lwe-RU. Aliexpress Ulwimi lwesiRashiya.
Funda kwi ngokuchofoza apha.
Aliexpress Ixabiso lexabiso lemveliso kunye namakhuphoni
Fumana ngokuchofoza apha.
Aliexpress owaziwa ngokuba nguAli, Aliekspress, Aлиэкспресс, Ali Express, Ali Ekspress, Aliexpress Lithuania ...
Umsebenzisi: 4.71 (7 ukulinganisa)
Tags:aleexpresalexpresalexpresAliokanye ubonakaliseAli ExpressAli Expressii-aliauxinzeleloioyileI-AliekspressaliexpressAliexpress imali ebuyayoaliexpress imbambanoAliexpress impikiswanoAliexpress kwii-euroaliexpress i-lithuaniaaliexpress ngesiLithuaniaaliexpress ngesiLithuaniaaliexpress ltAliexpress ubhalisoaliexpress ruAliexpress ngesiRashiyaZonke zibonakalisaIalfresaly ukucacisaaly xpressalyexpresmalunga neendlekocahbackasimali ebuyayoinfoiimpahla ezivela Chinaru aliexpressI-Aliexpress
Ukongezwa kwoluhlu lweintandokaziKususwe kwiluhlu lweintandokazi 1
Izimvo ezivela kwi5
Juras Ngomhla we-2019 ku-Matshi 6 ngo-14: 19 pm
Ndiyabulela kwesi sihlandlo esibanzi.
Jonas Nge-2019 kaSeptemba ngo-19 nge-8: 46 kusasa
Kutheni le nto kubalulekile ukukhangela iimpahla ngokuzibopha, yintoni embi kakhulu kwezinye iilwimi? Siyifumana phi isigama sobugcisa? Ngapha koko, asisiyo ikholoni yesiNgesi.
info @tenpigiau.lt Nge-2019 kaSeptemba ngo-22 nge-23: 11 kusasa
ngokulula Aliexpress liqonga laseTshayina lokurhweba kwihlabathi liphela. Kuya kuba yinto engenakwenzeka ukuguqulela indawo kuzo zonke iilwimi, ukuba unikiwe Aliexpress ukuthengisa imithombo eyahlukeneyo esekwe kwiimveliso ze-100mln. ILithuania yintengiso encinci kakhulu, ngenxa yoko abayifundi indlela yokutyala imali ekuhlanganiseni indawo. Ukulungiselela abathengi Aliexpress ineenguqulelo zolwimi zamanye amazwe (isiNgesi, isiRashiya, isiTshayina, iSpanish ...). Ewe, ukuba awubahlawulanga, ungasebenzisa uGuqulelo lweGoogle ukuguqulela indawo kwisiLithuania, kodwa eneneni indawo iya kuhlala ngesiNgesi kwaye kuya kufuneka bakhangele iimpahla ngesiNgesi.
Uninzi lwamagama liguqulela ngokufanelekileyo https://translate.google.com/ , kodwa ungazama nayo http://vertimas.vdu.lt
Ndiyathemba ukuba ndiwuphendule umbuzo wakho.
Umntu ongaziwayo Nge-2019 kaNovemba ka-23 ngo-20: 36 pm
Ungazitshintsha njani ii-imeyile | aliexpress
info @tenpigiau.lt Nge-2019 kaDisemba ngo-10 ngo-14: 35 pm
Nantsi indlela yokwenza: https://service.alibaba.com/buyer/faq_detail/10631742.htm